IFTIINKACUSUB.COM: Nin sheegay in uu khaati ka joogo cunista Hilibka Dadka!!
Nin sheegay in uu khaati ka joogo cunista Hilibka Dadka!!
Maxkamadda Gobolka Kwa-Zul Natal ee dalka South Africa, ayaa waxaa la horkeenay Shan nin oo lagu eedeeyay in ay dadka cunni jireen ama dad cunnayaal ay ahaan jireen.
Shanta nin sidoo kale waxyaabihii lagu eedeeyay waxaa kamid ahaa dil iyo inay maleegeen dilal.
Boolisku waxay rumaysan yihiin in koox isku xiran oo ka shaqaysata xubnaha jirka bani'aadanka ay gobolka joogaan. Waxaana dhinaca kale ay sheegeen in kuwa kalena lagu raadjoogo.
Shanta nin ee maxkamadda la hor keenay waxaa la rumaysan yahay in midkood uu yahay dhakhtar dawo dhaqameedka yaqaanna oo iskiis booliska isugu soo dhiibay, isagoo u sheegay inuu khatiyaan ka istaagay cunista hilib bani'aadam.